सोल्टी होटलको क्लबमा रडाको मच्चिएपछि गभर्नरका छोराको करङ भाँचियो ! «
सोल्टी होटलको क्लबमा रडाको मच्चिएपछि गभर्नरका छोराको करङ भाँचियो !
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार २२:२१
ताहचलस्थित होटल सोल्टी काठमाडौंका उच्च वर्गीयहरुको पहिलो रोजाइ हो। क्राउन प्लाजाले व्यवस्थापन गर्ने यो होटल भित्र प्राइभ नेपाल नामको एउटा भीआइपी क्लब पनि छ।
हिरो, हिरोइन तथा मोडलहरूबीच पनि प्राइभ लोकप्रिय छ।